မတျ 22, 2020 – Healthy Life Journal
ဗီတာမင်အေ ပါဝင်မှုများသည့် အသီးအနှံများ စားသုံးပါက အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့ကျစေနိုင်
ကိုထက် လေ့လာမှုအသစ်အရ မုန်လာဥ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ကန်စွန်းဥ စတဲ့ ဗီတာမင်အေ ပမာဏအများအပြား ပါဝင်တဲ့ အသီးအနှံတွေဟာ အရေပြားကို များစွာ အထောက်အကူပြုစေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေကို စားပါက အရေပြားအတွက် လိုအပ်တဲ့ဆဲလ်အသစ်တွေကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ အထောက်အကူ ပြုရုံသာမက နေရောက်ခြည်မှ...
မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကနေဒါလူမျိုးအများစုဟာ နေ့တိုင်း ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ ပြဿနာ ခံစားနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဆီးမထိန်းနိုင်တဲ့ ဝေဒနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူအများစုဟာ လက်ဆင့်ကမ်းပြောလာတဲ့ တခြားသူတွေရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို လက်ခံထားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအယူအဆတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှန်သိစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အယူအဆ...
ပါမောက္ခဦးခင်မောင်ဝင်း (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. အသည်းခြောက်/အသည်းကြွပ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. အသည်းခြောက်/အသည်းကြွပ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖြစ်အများဆုံးက ဘီပိုး၊ စီပိုးကြောင့်ပါ။ နောက်တစ်ခုက အရက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အသည်းအဆီဖုံးတာကြောင့် အသည်းခြောက်တာ အဖြစ်များလာနိုင်ပါတယ်။...
မတျ လ၊ 2020 ခုနှဈ